Maka: isoftware yokuphatha isiphakamiso
Eminyakeni embalwa edlule, ukuthengisa kushintshe kakhulu ngokuza kweminyaka yobudijithali. Ngokuqondile, ukuthi abantu bazithumela futhi bazithole kanjani iziphakamiso zokuthengisa kuye kwathuthukiswa ngokwakhiwa kwezinhlelo zokuphathwa kweziphakamiso zokuthengisa online, njengeklayenti lethu iTinderBox. Kungani lezi zixazululo zingcono kunokumane ubhale isiphakamiso sokuthengisa ku-Microsoft Word? Yebo, senze i-infographic ephelele ngakho. Ukukhiqiza kukhuphuka kakhulu ngokusebenzisa esinye salezi zixazululo,